debunked ဂြိုဟ် X ကိုဒဏ္ဍာရီ - သတင်း Rule
debunked ဂြိုဟ် X ကိုဒဏ္ဍာရီ
ဒါဟာအဘို့တစ်ခုတွေ့ရခဲသောဂြိုဟ်ခဲ့သည် 200 အနှစ်ကိုရှင်းပြအားထငျရှား ယူရေးနပ်စ'' ကိုယ့် wobbly ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း. ထိုအခါအစ်မနေရောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးတွင်ဖြစ်ဆိုခဲ့ရှိ၏ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က ကဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားသည်ကမ္ဘာမြေဆီသို့ swerve စေ.
ကိုယ့်တဦးတည်းပြဿနာရှိပါတယ်: မဟုတ် “Planet ကို X ကို” မဟုတ် “Nemesis” အစဉ်အဆက်တည်ရှိ, သုတေသီများသည်ယခုပွောဆို.
“ပြင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အားဖြစ်နိုင်ကြီးမားတဲ့ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီးဂြိုဟ်ဆံ့မပါဘူး (“Planet ကို X ကို”), ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့, အဖော်ကြယ်ပွင့် (“Nemesis”),” တက္ကသိုလ်က Pennsylvania ပြည်နယ်၏နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကီဗင် Luhman ကောက်ချက်ချ, အဘယ်သူသည် NASA ရဲ့ Wide-Field Infrared စစ်တမ်း Explorer ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုညွှန်ကြား (ပညာရှိ) အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး.
ရလဒ်အရူပနက္ခတ္တဗေဒဂျာနယ်များ၏လတ်တလော edition အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်.
အများစုမှာသီအိုရီဂျူပီတာ၏အထိလေးကြိမ်အရွယ်အစားဖြစ် Planet ကို X ကိုခန့်မှန်းခြေခဲ့ — ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးဂြိုဟ်.
သူတို့ကအချို့တွေ့ရှိရလိမ့်မည်ဟုအကြံပြု 1,486 ဘီလီယံအထိကီလိုမီတာ (923 ဘီလီယံအထိမိုင်) နေရောင်ကနေ, သို့မဟုတ်အကြောင်း 10,000 ကမ္ဘာမြေရဲ့ပတ်လမ်းထက်အဆဝေးတဲ့.
သို့သော်တယ်လီစကုပ်အားဖြင့်စုဝေးစေရုပ်တုဆင်းတုဂျူပီတာထက်ပိုကြီးမည်သည့်အရာဝတ္ထု detect မပြုခဲ့.
တစ်ဦးကကွန်ပျူတာရရှိသောနာဆာ Montage generated 29 သြဂုတ်လ 2002 အ Voyager အားဖြင့်ကောက်ယူပုံရိပ်တွေကနေ2အာကာသယာဉ်နီယမ်ကိုပြသ (lower-L ကို) ဒါကြောင့် Triton ချဉ်းကပ်တဲ့အာကာသယာဉ်ကနေပေါ်လာမယ်လို့အဖြစ်, နီယမ်၏အကြီးဆုံးလ
ကအနီးကပ်တယ်လီစကုပ်ကွယ်တဲ့တောက်ပတဲ့ကြယ်ပွင့်နှင့်အတူ aligned သို့မဟုတ်ဆိုခဲ့ခဲ့ထက်အများကြီးသေးငယ်ကြ၏မယ်ဆိုရင်ဒါဟာရှာဖွေရခက်ပါလိမ့်မယ်.
သို့သော်ဤနောက်ဆုံးစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးနောက်, Luhman တယောက်ရှာတွေ့၏လေးသာမှုကအရမ်းနည်းပါးတယ်ဟုပြောသည်: “ဒါကတရာအခွင့်အလမ်းအတွက်တဦးတည်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။”
– Planet ကို X ကိုသမိုင်း –
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပထမဦးဆုံး Planet ကို X တွင်၏တည်ရှိမှုစိတ်ကူး 1781, သူတို့ယူရေးနပ်စကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ, ၎င်း၏ Orbital မူကွဲနှင့်အတူနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အံ့သြတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီး, ဆွဲငင်အား၏နယူတန်ရဲ့ဥပဒေများနှင့်အပုံသဟဇာတ.
အင်္ဂလိပ်: ဒါကအာကာသယာဉ် Voyager အားဖြင့်ယူဂြိုဟ်ယူရေးနပ်စ၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်2တွင် 1986 (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Planet ကို X ကိုခြေရာခံရန်ကြိုးစားခြင်းနီယမ်ထဲမှာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှဦးဆောင် 1846. ဒါပေမယ့်နီယမ်၏ခန့်မှန်းခြေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ယူရေးနပ်စရဲ့ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း၏သွေဖီကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး.
ဒါက Planet ကို X ကိုအဘို့မိမိတို့ရှာဖွေရေးဆက်လက်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဦးဆောင်သော — အရာ, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ပလူတိုအတွက်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှဦးဆောင် 1930. သို့သော်ထောင်ပြီးဂြိုဟ်လည်းနေရောင်ကိုပတ်ပတ်လည်ယူရေးနပ်စရဲ့မမှန်လမ်းကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့သေးငယ်လွန်းခဲ့.
နောက်ဆုံး, 1990 ခုနှစ်, သုတေသီများသူတို့အနည်းငယ်နီယမ်၏ဒြပ်ထုမတန်တဆခဲ့ကွောငျးဆုံးဖွတျ, သောဂြိုဟ်တကယ်တော့ယူရေးနပ်စရဲ့ Orbital အပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ရည်ရွယ်.
သို့သျောလညျးကို Planet ကို X ကိုယုံကြည်သူများဆဲယုံကြည်တယ်မဟုတ်ကြ.
– အစ်မနေရောင်ဒိုင်နိုဆောသတ်ဖြတ်? –
Nemesis ၏တည်ရှိမှု, အနီးအနားမှာနေတဲ့နေရောင်ကဲ့သို့ကြယ်ပွင့်, ပထမဦးဆုံး 1980 ခုနှစ် posited ခဲ့သည်. အဆိုပါကြယ်ပွင့်, ရံဖန်ရံခါနေရောင်နီးကပ်လာရောက်လာသောအားဖြင့်, ရံဖန်ရံခါကမ္ဘာမြေထိဖို့သူတို့ကိုဦးဆောင်ယျတံခှနျနှင့်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ၏ပတ်လမ်းနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျ.
ဤကဲ့သို့သောဝင်တိုက်ပြီးခဲ့သည့်အုပ်ငါးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးသုဉ်းဘို့အပြစ်တင်ကြသည် 540 နှစ်ပေါင်းသန်း — လတ်တလောအဒိုင်နိုဆောမျိုးသုဉ်းဖြစ်ခြင်း 65 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်း.
“နှစ်ပေါင်းများစွာဒါ, အဲဒီမှာတစ်ခုခုရှိစေခြင်းငှါ, အကြံပြုခြင်းအထောက်အထား၏ကွဲပြားခြားနားသောအပိုငျးပိုငျးတှေရှိခဲ့တယျ,” Luhman AFP သို့ရှင်းလင်း.
Planet ကို X နှင့် Nemesis များအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းအချည်းနှီးသောင့်လှည့်ကြပေမည်, ဒါပေမဲ့လေ့လာမှုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကိုပြု 3,525 ကြယ်နဲ့အညိုရောင်ထောင်ပြီး — အဘယ်သူ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်တစ်ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးကြီးမားသောဂြိုဟ်အကြားသူတို့ကိုလိုကျတယျကောငျးကငျတ္ထု — အတွင်း 500 နေရောင်၏အလင်းနှစ်ပေါင်း.
“ရုံပညာရှိဒေတာထဲကခုန်လွင်ပြင်မျက်မှောက်၌ပုန်းအောင်းခဲ့ကြကြောင်းအိမ်နီးချင်းကြယ်ပွင့်စနစ်များ,” Ned Wright ကပြောပါတယ်, တစ်ဦး ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က, Los Angeles မြို့ လေ့လာမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သောသူနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်.
26066	0 ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီး, နာဆာ, Nemesis, နီယမ်, နီယမ်ထက်ကျော်လွန်ဂြိုလ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်, ယူရေးနပ်စ, wide-လယ်ကွင်း Infrared စစ်တမ်း Explorer ကို
← RIAA Google က '' မူပိုင်ခွင့်ကိုတိုက်ဖို့ပိုလုပ်ဖို့လိုလား’ တိုက်ပွဲများလိမ်လည်မှုအဘို့အနယူး tool ကို →